Wararka - Goorma ayay dhirta dherigu beddelaan dheryaha? Sidee loo beddelaa dheryaha?
Haddii dhirtu aysan wax ka beddelin dheriyada, koritaanka nidaamka xididku wuu xadidnaan doonaa, taas oo saameyn ku yeelan doonta koritaanka dhirta. Intaa waxaa dheer, carrada dheriga ayaa sii kordheysa la'aanta nafaqooyinka iyo hoos u dhaca tayada inta lagu jiro koritaanka geedka. Sidaa darteed, badalida dheriga waqtiga saxda ah waxay ka dhigi kartaa mid soo nooleeya.
Goorma ayaa dhirta la soo celin doonaa?
1. U fiirso xididdada dhirta. Haddii xididdadu ay fidsan yihiin meel ka baxsan dheriga, waxay ka dhigan tahay in dherigu aad u yar yahay.
2. U fiirso caleemaha geedka. Haddii caleemaha ay sii dheeraadaan oo ay sii yaraadaan, dhumucduna way sii khafiifaysaa, midabkuna wuu khafiifayaa, waxay ka dhigan tahay in ciidda aysan nafaqo ku filnayn, oo ciidda loo baahan yahay in lagu beddelo dheriga.
Sidee loo doortaa dheriga?
Waxaad tixraaci kartaa heerka koritaanka geedka, oo 5 ~ 10 cm ka weyn dhexroorka dheriga asalka ah.
Sidee loo soo celiyaa dhirta?
Qalabka iyo aaladaha: dheryaha ubax, carrada dhaqanka, dhagax luul, xiirashada jardiinada, majarafada, vermiculite.
1. Geedaha ka soo saar dheriga, si tartiib ah ugu cadaadi cufka cufanada xididada gacmahaaga si aad u kala furto carrada, ka dibna u kala saar xididada ciida.
2. Go'aami dhererka xididdada la hayo iyadoo loo eegayo cabbirka geedka. Markuu weynaado geedku, ayuu sii dheeraadaa xididada la haysto. Guud ahaan, xididdada ubaxyada cawsku waxay u baahan yihiin oo keliya inay dhererkoodu ahaadaan 15 cm, qaybaha xad-dhaafka ahna waa la gooyaa.
3. Si loo tixgeliyo soo-saarista hawada iyo haynta biyaha ee carrada cusub, vermiculite, pearlite, iyo carrada dhaqanka ayaa si isku mid ah loogu qasi karaa saamiga 1: 1: 3 ee ah carrada dheriga cusub.
4. Ku dar carrada isku qasan qiyaastii 1/3 ee dhererka dheriga cusub, xoogaa ku garaac gacmahaaga, geli dhirta, ka dibna ku dar ciidda illaa ay ka buuxdo 80%.
Sidee loo daryeelaa dhirta ka dib markii la beddelo dheryaha?
1. Dhirta hadda dib loo soo rogay kuma haboona iftiinka qoraxda. Waxaa lagugula talinayaa inaad dhigto geedaha dushooda ama balakoonka halka uu iftiin ka jiro laakiin aan ahayn qorraxda, qiyaastii 10-14 maalmood.
2. Ha bacrimin dhirta cusub ee la soo celiyay. Waxaa lagugula talinayaa inaad bacrimiso 10 maalmood ka dib markaad dheriga bedesho. Markaad bacriminaysid, qaado qadar yar oo ah bacriminta ubaxa oo si siman ugu saydh dusha sare ee ciidda.
Goynta goynta xilliga
Guga waa wakhti ku habboon dhirta inay beddelaan dheriyada iyo goynta, marka laga reebo kuwa ubaxaya. Marka la goynayo, goynta waa inay u jirtaa 1 cm meel ka hooseysa petiole-ka hoose. Xusuusin gaar ah: Haddii aad rabto inaad hagaajiso heerka badbaadada, waxaad ku dhex qori kartaa wax yar hormoonka koritaanka xididka afka goynta.